China China Warshada China ee si buuxda noolojoobay PLA waxay istaagtaa baakadaha kraft paper bacaha leh daaqada iyo warshadda jilibka iyo soosaarayaasha | Oemy
Qaxwaha & Bacaha Shaaha
Bacaha Raashinka Xoolaha
Miraha la qalajiyey & bacaha lowska
Caafimaadka & Bacaha Cuntada lagu dubayo
Kiish-la-taag leh oo leh daaqad iyo jibbaar
Kiishashka taagan ee aan daaqad lahayn
Kiish-la-taag la'aan sibidh la'aan
Shandad dammaanad ah oo siddeed dhinac ah oo leh jibbaar
Shandad dammaanad ah oo siddeed dhinac ah oo aan lahayn jibbaar
Shandad saddex-dhinac ah oo aan lahayn jibbaar
Shandad saddex-dhinac leh oo sibidh leh
Bacaha dhabarka-seal-la'aanta ah
Bacaha dhabarka-ku-xidhay oo leh gusset
Afar-side-seal bacaha gusset
Hal-dhinac-seal bacaha gusset
Baakad aad u adag oo VMPBAT ah oo baayacmushtar ah
Iibiyaha Shiinaha ee bacda eco-da-dabaalsan
Iibiyaha Shiinaha ee baakadaha hoose ee afar gees leh oo leh compo...
Warshada Shiinaha ee si buuxda biodegradable PLA istaago p...
Iibiyaha Shiinaha ee baakadaha hal-side-seal ee shaaha le...
Bacaha baakooyinka hoose ee afar geesoodka ah ee sideeda dhinac ah ee e...
Ku dabool warqad sifee Boorsada Shaaha ee duudduuban
OEMY Custom 8 dhinac oo shaabadeeyey labajibbaaran hoose
Cagaar saafi ah oo xaashida masduulaaga ah waxay istaagi kartaa boorsada iyo tra...
Bacaha gunta hoose ee warqadda Brown oo leh AL foi...
Xidhmada cuntada engegan ee saaxiibka la ah kor u qaad
OEM square hoose brown kraft warqad kafeega budada pa ...
Baakad hoose oo afar gees ah oo cusub
Bacaha baakadaha biodegradable daabacaadda hal abuur leh ee bariiska
Soo-saare xirfadle ah oo si buuxda u noole nut...
Warshada Shiinaha ee bacaha miraha la qalajiyey ee bacaha dib loo xidhay
Soo saaraha Shiinaha ee warqad kraft printing midabo ...
Warshada Shiinaha ee PLA oo si buuxda u noolayn karta waxay istaagtaa bacaha bacaha waraaqaha kraft ee daaqada iyo jibbaarka
PLA si buuxda u noole noolayn kara bacaha bacaha kraft paper oo leh daaqado iyo jibbaar , baakadaha caleenta shaaha, baakadaha digirta qaxwaha, ama bacaha alaabada kale.
Tani kaliya maaha bacaha baakadaha fudud ee alaabtaada. Kani waa sidaha summada shirkaddaada, xayaysiisyada mobaylada, isgaarsiinta qiimaha leh. Muhiimadda ugu weyni waa in ay deegaan ahaan u wanaagsan tahay.
1.Bacaha baakadaha laga sameeyay warqad PLA + PBAT + Kraft, taas oo ah walxo la isku qurxiyo.
2.Marka ay bacdu dhamaystirto doorkeeda ganacsi, waxa ay hoos u dhigi kartaa carro sannad gudihiis oo ay nuugtaa dhirta. Runtii waxay ka timid dabeecadda oo ku soo laabatay dabeecadda.
3.No more wasakhaynta deegaanka. Dunidu way fiicnaan doontaa oo way fiicnaan doontaa.
Xogta faahfaahsan ee bacaha baakadaha noole rogrogmi kara
waxyaabaha: PLA+PBAT+ warqad Kraft
Shahaadooyinka: FSSC22000, SGS iwm .. shahaadada FDA ayaa sidoo kale waxaa la samayn karaa haddii loo baahdo
Shaabadeynta & Xakamaynta Daboolka kulaylka
Wax ka qabashada dusha sare Duubista
Qiimo: Iyada oo ku saleysan alaabta, cabbirka, tirada, midabada daabacaadda iyo Shuruudaha kale ee macaamiisha (Qiimaha la dhajiyay ee tixraaca kaliya)
Lacag bixinta: T/T, Paypal, Western Union, dammaanadda ganacsiga aqbal
30% qiimaha bacda + 100% dhululubada daabacaadda waxay ku dalacayaan dhigaal ahaan, 70% dheelitirka ka hor inta aan la rarin
Tusaale: 1). baarka stock Free & Nice bixiyey oo kaliya xamuulka ururiyaan
xirxirida: Dhoofinta kartoonada/sanduuqyada caadiga ah (≤25Kg), sida baakadaha la habeeyey
Sawirada Sawirada ee Bacaha Baakadaha Noodegradable
Tilmaamaha gaarka ah ee bacaha baakadaha noolaha ah
1. Sipper-ka adag, oo ka samaysan PLA, kaas oo la furi karo oo la xidhi karo marar badan,
Dammaanad adkaanta bacda. Waxaa lagu xaalufin karaa ciidda
2.Daabacaadda qoraalka saxda ah, daabacaadda qaab midab cad
3. Wax qabad heer sare ah oo aan biyuhu lahayn
Shandadu waa mid aan biyuhu lahayn oo aan qoyaanka ilaalinayn, wayna fududahay in lagula tacaalo heerkulka hooseeya iyo xilliga qoyan.
4.Waraaqo Kraft oo tayo sare leh, filim PLA + PBAT biodegradable ah, waa saaxiibtinimo s environmentally friendly and great value
5.Strong taagan- hoos hoose , oo leh awood qaadis weyn
6.Xoog adag. Boorsada baakadaha leh iska caabin jeexjeexeed wanaagsan oo waara
7.Daaqadda hufan ee caanaha cad, tani waa caddayn muhiim ah oo muujinaysa in tani ay tahay wax si buuxda loo dumin karo.
8.Qaabka daaqada wuxuu noqon karaa naqshad shakhsi ahaaneed, xabag la'aan, boodh-caddayn
1.In suuqa, 99.9% ee valves hawada ka samaysan yihiin caag PE, oo waxay qaadataa 1000 sano in ay gebi ahaanba hoos u. Waxyeelo weyn bay u tahay deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, waalka hawada PLA waxa uu ka samaysan yahay walxo warshadeed waxana lagu xaalufin karaa ciidda 2-3 sano gudahood. Noqda biyo iyo kaarboon laba ogsaydh ay nuugtay dhirtu.
2.Waa farsamo ahaan adag in la sameeyo waalka hawada ee PLA. Farsamadani waxay ku jirtaa gacanta tiro aad u yar oo soosaarayaal ah, shirkadda OEMY ayaa ka mid ah.
Cabbirka lagu taliyey ee bacaha baakadaha
Codsiga bacaha baakadaha
1.Bacaha baakadaha biodegradable waa bacaha deegaanka u fiican oo aad u badan. Inta badan loo isticmaalo baakadaha: coffee bean,coffee powder ,Tea leaves, Rice, dried fruit, snack food, dried meat, whole grains, tea ,etc.
2.Waa waqtigii aad u bedeli lahayd bacahaaga bacaha bacaha baakadaha noole deg degga ah. Wasaaq yar oo deegaanka ah, oo cagaar badan u leh adduunka.
Tallaabooyinka iibka iyo wax-soo-saarkayaga.
Shirkadda 1.OEMY waxay ku takhasustay bixinta xalalka baakadaha bio-degradable ee alaabada kala duwan.
2.Client waa mudnaantayada koowaad . Waxaan u heellannahay inaan la kulanno macaamiisha. Baahida iyo gelinta kheyraad badan R&D. Hadafkayagu waa inaanu siino badeecada iyo adeega saxda ah macaamiisheena.
3.Waxaan leenahay mashiinka ugu fiican iyo tiknoolajiyada ugu horumarsan ee warshadaha si ay u soo saaraan alaabta ugu faahfaahsan iyo tayada sare leh. Waxaan hubineynaa in dhammaan shuruudahaaga ay ku oofi doonaan waqtigii loogu talagalay.
4.Our guul waxay ku xiran tahay taageerada macaamiisha. Guushaadu waa welwelkayaga! Waxaanu baakadaynaa guushaada, xidhmooyinkaaga fiican ayaa halkan ka bilaabmaya.
Dalabkaaga hadda ka hel xalka baakadaha la habeeyey.
A: Haa, Waxaan nahay soo saaraha 15 sano ah oo isku dhafan R & D, soo saarista, habeynta iyo suuq-geynta. Warshadayada Dongguan Magaalada Guangdong ee Gobolka
A: Nooca bacda, maaddada, cabbirka, dhumucda, Miisaanka alaabta loo baahan yahay
J: Muunadaha saamiyada waa bilaash, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixisid xamuulka.
Haddii aad u baahan tahay inaanu ku samayno muunad nakhshad leh, waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka muunada. Haddii mustaqbalka dalbo oo tiradu gaadho tiro cayiman, waxaanu kugu soo celin karnaa kharashka muunada.
A: Tayada iyo 100% bacaha biodegradable waa dhaqankeena, waxaan ku lifaaqnaa muhiimad weyn ilaalinta tayada laga bilaabo bilowga wax soo saarka, iyadoo la adeegsanayo 100% walxo biodegradable si loo sameeyo bacaha baakadaha, sida PLA, PBAT
J: Haa. Iyo 100% hawadu ay deg-degayso ee hawo-mareenka iyo siibadaha waxaa soo saaray farsamayaqaanadeena.
J: Dhab ahaantii maya. Waxaan nahay shirkad dhisan. Waxaan fahamsanahay in mid ka mid ah uu leeyahay xuquuqda daabacaada ee ganacsigiisa/calaamadaheeda. Waxaan ixtiraameynaa xaqa iyo sirta macaamiisheena mana u sheegi doono kuwa kale.
J: Muddada gaarsiintayadu guud ahaan waa 15-25 maalmood gudahood, laakiin xilliga dhalmada dhabta ah waxay kuxirantahay shuruudaha
Previous: Warshada Shiinaha ee bacaha dib u xidhidhiyaha gusset baakadaha biodegradable ee caleemaha shaaha
Next: Baakadaha Shiinaha ee alaab-qeybiyaha noolaha ah ee PLA waxay istaagaan bacaha waraaqaha kraft
bacda PLA biodegradable
bacaha PLA biodegradable
Kiishka PLA biodegradable
boorsooyinka PLA biodegradable
bacda PLA-da la kariyo
bacaha PLA-da la kariyo
Baakadaha PLA-da la burburin karo
boorsada baakadaha PLA-da la kariyo
Bacaha baakadaha PLA-da la kariyo
Kiishka baakadaha ee PLA-da la kariyo
Kiishashyada baakadaha PLA ee la kasban karo
Kiishka PLA-da la kariyo
boorsooyinka PLA-da la curin karo
Boorsada PLA ee guriga lagu karsado
bacaha PLA-ga guriga lagu karsado
Baakadaha PLA ee guriga lagu karsado
boorsada baakadaha PLA ee guriga lagu karsado
Bacaha baakadaha PLA ee guriga lagu karsado
Kiishashka baakadaha ee PLA-ga la dumin karo
Kiishashyada baakadaha PLA-ga ee guriga lagu karsado
Kiishka PLA ee guriga lagu karsado
boorsooyinka PLA ee guriga lagu karsado
bacaha xirxirida lowska warqad farsamada Recycle la cad ...
bacaha Baakadaha lowska daabacaadda Clear la transpar ...
Baakadaha kuleyl ee xiran oo si fudud loo shaaha...
bacaha Baakadaha uurqaadida baaba'aysa for nuts
warqad farsamada Brown Baakadaha lowska aan wax rumaha ...
3 nooc oo si buuxda u naafayn kara S...
Faa'iidooyinka warqadda kraft-ka ee xirmada cuntada...
Bac-Baac Wasakhaysan-White Pollution T...
Astaamaha Agabka Biyodegradable
OEMY si guul leh u horumarisay VMPBAT
R1014,F10, A6, Yongning Street, Zengcheng, Magaalada Guangzhou, Gobolka Guangdong, Shiinaha.
qalalan Fruit koley , Non-daruuriga Dambiisha Baako Cuntada, qalalan Fruit beddelo Baako , Dambiisha Baako Cuntada Caafimaadka, Dambiisha Baako Butros Cuntada , qalalan Fruit beddelo ,